Avy amin'ny voankazo Tiorka an'i Rutger Hauer ho an'ny Gay Pride sy ny fetibe Milkshake: Martin Vrijland
Avy amin'ny voankazo Tiorka an'i Rutger Hauer ho an'ny Gay Pride sy ny fetiben'ny Milkshake
Filed in NY SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 29 Jolay 2019	• 5 Comments
Nanontaniana aho omaly raha nahita ireo sarimihetsika Rutger Hauer aho. Raha ny filazan'ny mpanoratra dia sary mihetsika mihetsika izy ireo. Voankazo Tiorka satria nanaparitaka ny fady vetaveta ary milamina ihany ilay sarimihetsika hafa. Mbola tsy nahita sarimihetsika roa akory aho, satria manana karazana tsy fihetsehana voajanahary amin'ny hypes, saingy mazava ho azy fa fantatro ny momba azy ireo. Ny sarimihetsika iray dia mahavoafatra kokoa noho ny fanombohana ny kolontsaina firaisana ara-nofo malalaka (ilay olona izay sosotra be tahaka ny fifandraisany manokana) ary ny iray hafa dia filma fampielezan-kevitra iray izay manana tantara voaorina tanteraka manodidina ny '40-' 45 azo itokisana amin'ny vahoaka. Na izany aza, tsy tena mankarary ny tantara ny olona ary raha mihetsika amin'ny tantaram-pitiavana ilay sarimihetsika milamina tsara, dia tsy ho ela dia lasa ny fahamarinana izany dikan-tantara izany; indrindra raha hiteny ianao (tena atahoranao) fa horonantsary miorina amin'ny boky "autobiografika". Izany fitaka izany foana!
Maty tamin'ny herinandro lasa i Rutger Hauer ary olona maro no miverina amin'ny 'nostalgia' amin'izao fotoana izao. Mieritreritra aho indraindray:Firy ny lahatsoratra tsy maintsy soratanao alohan'ny hahatsapan'ny olona fa ny TV, ny vaovao, indrindra fa ny sarimihetsika sy ny fitaovana fampielezan-kevitra?"Toa olona maro no mino fa ny fahitalavitra, ny sarimihetsika ary ny andiam-pandrosoana no fitaovana ampiasaina ho an'ny fandaharana ny rafi-pinoana amin'ny alàlan'ny tantara iray (na tsikaritra fotsiny ny hoe tsy misy dikany na 'teorika'). Manoratra aho). Avy eo dia tsy miresaka akory momba ny programa famotsoran-keloka izay ampiharina matetika. Raha toa ianao ka mandinika ny tantaran'ny Ady Lehibe Faharoa ary fantatrao fa samy naka sary tao amin'ny fanamiana SS ny Printsy Bernhard sy Prince Philip ao Royaume-Uni ary raha mahita ny fifandraisana amin'ny fitondrana Nazi ianao, dia afaka mahafantatra izany ianao Ny tantara ofisialy dia tsy mifanaraka tanteraka amin'ny zava-misy. Tsy misy zavatra marina! Avy eo dia azonao atao ihany koa ny mihevitra fa ny sarimihetsika dia mikendry ny hisambotra sary sasantsasany an'io ady io eo amin'ny lohanao, izay mifanohitra amin'ny zava-misy. Raha manapa-kevitra ny hankany amin'ny horonantsary ianao ary hamela azy hitranga aminao, dia mamita-tena ianao.
Ny teny hoe 'fady' dia tena mahaliana ny dinihina ao anatin'ireo horonantsary mpisava lalana nataon'i Rutger Hauer. Ny indostrian'ny pôrnôgrafia dia mampiseho fa ny olona dia tia mijery firaisana. Ny teknolojia vaovao maro no voalaza fa notohanan 'ny fiovana amin'ny sehatry ny sary vetaveta. Izany farafaharatsiny no ambara amintsika ny 'vaovao' ary noho izany dia heverintsika fa marina. Noho izany dia afaka milaza ianao fa mivarotra tsara ny firaisana ary manazava bebe kokoa ny fahombiazan'ny voankazo Tiorka; sarimihetsika voalohany (karazana) misy sary. Ny fiheverana ny hoe 'fady' dia raha ny hevitro dia foto-kevitra noforonina voalohany indrindra, satria ny fikaonan'ny firaisana hatramin'ny taloha indrindra sy ny fivarotan-tena dia asa matihanina indrindra eto amin'izao tontolo izao, ka ny hevitra momba ny 'taboo' dia zavatra tsy misy ifandraisany amin'ny tsy nataon'ireo fiangonana holandey tao Calvinist. niresaka be an-kalalahana. Tsy maintsy tapaka ny hevitra momba ny 'ota'; izay no toa ny fanazavana.
Noho izany, ny taranaka taranaka mpanabe dia nanjary toerana iray nalaina avy amin'ny sehatry ny taboo. Tsara ho azy izany, tsy noho ny fisainan'ny olona foana, ka izany foana no mitranga raha misy mpiara-misakafo mifamihina ao anaty fifandraisana amin'ny hafa, ka mampalahelo ilay iray hafa. Azonao atao koa ny manontany tena hoe ahoana no fomba fiasa ara-psikolojika. Hitantsika izany na aiza na aiza ao amin'ireo gazetiboky ary ao amin'ny vaovao rehefa "malahelo" i Gordon na i Sylvie dia diso fanantenana indray amin'ny "fitiavana" hanohy ny manaraka. Ny firaisana ara-nofo malalaka izay rava 'taboos' dia simba dia toa tsy mandeha tsara amin'ny fampiharana amin'ny fahatsapana fifandraisana izay antsointsika hoe 'fitiavana'. Ny psyche olombelona dia toa mahagaga ary ny firaisana ara-nofo sy ny fitiavana dia toa misaraka, nefa koa mamorona ekipa indray. Sa misy zavatra hafa miavaka eto ary moa ve ny sarin'olombelona noforomporonina amin'ny fomba toy izany ka mahatonga foana ny fiasco?
Raha ianao ity lahatsoratra ity novakianao, dia afaka nahita ny zavatra eritreretiko mikasika ny teoria momba ny evolisiona amin'ny tantaran'ny famoronana ianao. Raha fintinina dia raisiko ny fiheverana fa iray isika simulative reality mahita (toy ny mpilalao amin'ny famolavolana paolitika maro), ny toerana misy ny sarin'olombelona dia solosaina biôlôjika misy ny processeur centrale amin'ny loha (antsoina hoe atidoha) ary ny ADN dia miasa ho fahatsiarovam-peo mafy. ADN dia fitaterana fahatsiarovana. Ny siansa amin'izao fotoana izao dia mampiasa ny ADN ho toy ny fitaovana fitadidiana amin'ny ordinatera (jereo eto). Misy akoho iray mitsambikina avy ao amin'ny akanim-pasika dia mianjera ao anaty rano ary avy hatrany dia mahafantatra ny fomba hialana. Izany dia ao amin'ny fahatsiarovan'ny ADN an'io bio-solosaina io. Noho izany, ny fahatsiarovan'ny DNA antsika dia maka izay azontsika avy amin'ny razambentsika. Izany dia mihatra amin'ny lafiny rehetra. Ankoatra izany, mianatra ho an'ny tenantsika mandritra ny androm-piainantsika isika ary voatahiry ao amin'ny ADN, ka izany kitapom-batana izany dia hiverina amin'ny taranaka manaraka. Ny trangan-javatra dia fantatra amin'ny marary izay manana foibem-pandrefesana, ohatra, izay manana ny toetran'ny mpanakanto tampoka rehefa avy miblaogy. ADN dia fitaovana fitadidiana.
Ny fahafahana ara-nofo avy amin'ny razambentsika dia tafiditra ao anaty ADN koa. Ohatra, nanana namana iray izay ny reniko dia nahazo ny fiainany tamin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo ary izay afaka ihany koa tamin'ny fanehoan-keviny. Nanontaniany aho raha tsy mamindra fo raha te-ho tonga hanao firaisana amin'ny sipany. Ho azy dia toa ny zavatra mahazatra indrindra eto amin'izao tontolo izao. Angamba misy karazana 'firaisana ara-nofo malalaka' atao ao amin'ny programa ADN fototra rehetra, satria maro ny olona tsy mahatoky amin'ny fifandraisana, na dia eo aza ny fahatsapan'ny "fitiavana". Toa mitranga izany indraindray ny fiaramanidina voalohany (io programa DNA io) indraindray.
Raha ny momba ahy, dia afaka jerentsika ny sarin'olombelona (ao anatin'ity simulation ity) ho toy ny fitaovana super-bio fitaovana mahagaga. Ao anatin'ny ho avy tsy ho ela, ny orinasa biôlôjia dia mety hahafantatra tsara ny fomba hanavaozana ny olona amin'ny alalan'ny nanotechnology ary tsy ho gaga amin'izany hevitra izany isika; Ankehitriny dia mety ho sarotra ho an'ny maro izany. Ny programa AI izay mandeha amin'ny processeur-ntsika (jereo eto) dia nomanina modely roa izay manery ny "fitiavana" (fifandraisana amin'ny mpiara-miasa iray) ary etsy andaniny dia te-ho afaka.
Raha miresaka momba ny lahatsoratrao ianao dia hahita fa ny 'simulation izay iainantsika' ('izay hitanay / play' dia famaritana tsara kokoa) dia miorina amin'ny dualisma. Izany no fanararaotam-pahefana ilaina mba hifehezana ny mpilalao amin'ny lalana iray tsy misy dikany ny "lalànan'ny safidy malalaka." Io lalàn'ny fahalalahana io dia hisy foana amin'ny simulation. Raha tsy misy ny safidy malalaka, dia tsy simulation (izay tsy maintsy misafidy ny mpilalao) ny simulation, fa sarimihetsika fatra-marika (izay efa voafaritra mialoha ny valiny). Amin'ny fanararaotana dia afaka mandefa (toy ny amin'ny batterie) misy fehezan-dàlana mivantana amin'ny lalana iray ary mbola hanaja izany safidy malalaka izany. in lahatsoratra maromaro Noho izany dia hazavako ny fomba anaovana avatars ao amin'ity simulation ity izay tarihin'ny mpanorina (/ ny ekipa mpanorina).
Raha matetika ny sanganasa AI (izay mandeha amin'ny olan'ny atidoha bio-n'ny olombelona) matetika, dia hapetraka ao an-tsaintsika io resaka io. Avy eo izy io, toy ny teo amin'ny fahatsiarovana ny atidoha (fitadidiana miasa) mankany amin'ny fahatsiarovana ny ADN ('ny kapila mafy'). Ka raha ny 'vaovao' (fa koa ny haino aman-jery hafa) dia manambatra antsika amin'ny firaisana ara-nofo, Gay Pride na mitantara momba ny pedophilia ary matetika isika no miatrika izany, dia hiafara ao amin'ny fitadidiantsika ny lohahevitra tsy misy famindrampo. Mihatra izany amin'ny tatitra momba an'i Jeffrey Epstein na misy tatitra momba ny pedofilia (toa izany tatitra avy amin'ny pedo-flyers amin'ny Gay Pride). Ka raha manontany ahy ny mpamaky ny antony tsy nijerenako kely ny pedofilia tato ho ato, dia ho hitanao eto ny valiny, izany hoe: Izay tonga ao an-tsaina dia tonga ao an-tsaina ny ADN (amin'ny kapila mafy / ao anaty fonosana fototra). ny olombelona-bio-avatar dia marina izany. Ka inona no nanomboka tamin'ny fidobohan'ny 'Voankazo' tiana voankazo, mitohy amin'ny habituation amin'ny firaisana ara-nofo, mankany amin'ny habakabaka amin'ny firaisana ara-piraisana sy ny Pride Gay. Nanaraka ny fampielezankevitra ny avana. Ny olombelona aingam-panahy dia mbola afaka manitsy fa ny programa AI (noho ny fifehezana ny avatar olombelona amin'ny ambaratonga fahatsiarovan-tena), fa ny taranaka vao teraka dia manana izany rehetra izany ho fonosana fototra ao amin'ny ADN ny avatar olombelona vao teraka. Toy ny tamin'ny kapila mafy.
Ho an'ny ankizy ao amin'ny taran-tsakafo Tiorka, dia efa nisy fonosana fahatsiarovana fototra nodorana tao amin'ny ADN izay mitaky fahalalahana bebe kokoa amin'ny firaisana ara-nofo. Mazava ho azy fa mbola misy ny mifanohitra amin'izany ny ADN, satria ny taranaka rehetra dia mifanohitra amin'ny hevitra hoe 'fitiavana' amin'ny alàlan'ny haino aman-jery, filma, mozika ary gazety. Ny polarary dia nafindra avy amin'ny ADN ary koa ireo taranaka vaovao rehetra dia mahita ny fandaharana ireo media izay manompo ity taranaka vaovao ity miaraka amin'ny fonosan-tserasera. Ho an'ireo zanaky ny Prostate Gay Pride, ny fonosana fototra dia efa hita any amin'ny 'sehatra manintona' sasany. Azo takiana ho an'ity taranaka ity àry ny taboo vaovao. Ny taranaka izay hitantsika etsy ambany (jereo ny sary) mandihy eo Fetiben'ny milkshake ao Amsterdam. Ho an'ny sasany aminareo, ny akanjo sy fitondran-tena dia mbola hifanandrina sy adala, saingy izany dia noho ianao nahazo pikan-tsoratra fototra iray ao amin'ny ADN. Ny taranaka vao haingana dia natambatra ho amin'ny fandaharam-potoan'ny avana. Izany no mahatonga anao hahita rainbows na aiza na aiza hitodihanao. Efa nodorana tao anaty ADN izy io, ka ny programa fototra amin'ny ankizy no ahafantarana azy.
Io avana io dia manondro ny fananganana ity simulation dualista ity, izay maniry ny hanova ny mombamomba ny olombelona amin'ny hermaphrodite na ny tsy fitovian'ny lahy sy ny maha lahy sy ny vavy (tsy manaparitaka ny tenany intsony, fa ny fananganana fanjakana manara-dalàna) olombelona. Ny Transhumanisma dia miavaka amin'ny fifangaroana miandalana eo amin'ny olona sy ny AI (amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny AI naorina ao anatin'ity zava-misy ity). Ny tanjona faratampony dia ny hiara-hiasa tanteraka amin'ny AI isika ao amin'ny Luziferiana AI ary manao veloma ny rafitra biolojika (jereo Izany fanazavana ilaina izany). Ny tanjon'izany dia ny fametrahana ny endrika fahatsiarovan-tena voalohany izay mampiseho ity simulation ity (anisan'izany ireo avaratr'ireo aviavy ireo) dia nametraka ny hery famoronana nanoloana ny mpanorina ity simulation ity: Lucifer. Izany no mahatonga ny taranaka taranaka manaraka (izay sasantsasany mbola teraka amin'ny alàlan'ny famokarana ary ny hafa efa hatramin'ny IVF) dia tokony efa manana programana avana sy programan'ny transdragon / gender neutral amin'ny ADN. Toy ny hoe nodorana tamin'ny fahazarana izy io. Koa na aiza na aiza alehanao dia hitanao ny avana.
Ny fandaharan'asa izay natomboka tany Turks Fruit dia natsangana nanomboka tamin'ny taranaka nifandimby, mba hahafahan'ny paikady fahatsiarovana ny ADN ho mora miova tsikelikely amin'ny sehatra maimaim-poana, ho firaisana homosexuel, ho an'ny fandaharan'asa LGBTI. Ny dingana manaraka dia ny fanekena ny pedophilia sy ny fandaharana ny ADN miaraka amin'ny vehivavy manana volom-borona, lehilahy miaraka amin'ny tratra sy penises: ny fandaharana fandaharana ny avana. Izany dia programa dualistic tsy misy dikany izay tsy maintsy hodorana amin'ny ADN. Ny Baphomet, dualista, ny osilahy mitoka-droa: ny marika ho an'ny mpanamboatra ity simulation virus ity, Lucifer.
Lisitry ny rohy loharano: nos.nl, parool.nl
Avy amin'ny Gay Pride ho avonavona Amsterdam, avy amin'ny LHBTI ho LHBTIQAPC ary avy amin'ny homophobic to transphobic
Fampielezan-kevitra an-tserasera amin'izao fotoana izao ihany koa amin'ny fifidianana iraisam-pirenena misongadina avy amin'i Miss Spain Angela Ponce
Tags: fangadiana, namaky ny alalan ', Featured, voankazo, pelaka, Hauer, LHBTI, voasary, pedo, Pride, Ruger, miaramila, fady, Tiorka, dia
29 Jolay 2019 ao amin'ny 11: 56
29 Jolay 2019 ao amin'ny 21: 56
Lazao ny fahitana fa fitaovam-piadiana hivoahan'ny programa maasa foana.
Ny ankamaroan'ny olona dia mino na inona na inona sy ny zava-drehetra satria nahita izany tamin'ny masony manokana. Misy kiraro ve sa tsia André Kuipers?
Na ireo mpiara-miasa amiko tsy te hahafantatra izany dia manomboka manindrona ny lohany matetika kokoa.
29 Jolay 2019 ao amin'ny 23: 32
Aorian'i Noa, misy iray hafa miala amin'ny avana. Sayten (satana) na hiteny X.
Tena tsy voakasika tokoa isika!
akondro nanoratra hoe:
31 Jolay 2019 ao amin'ny 00: 21
4 Aogositra 2019 ao amin'ny 14: 14
Mazava ho azy fa tena marina ny zavatra lazainao. Matoky ny olona tany am-boalohany aho izay mieritreritra foana ary mbola tsy voapetraky ny olona eo amin'ny fahefana / hazavana / satanista na ny taranany mivantana an'i Jehovah / Annunaki sns. Ary oviana no hafatr'ireo fomba fiasa ireo izay efa adinontsika hatrizay ary efa hatramin'ny taonjato maro. sahirana?! Vakio ny Testamenta taloha / Torah sns miresaka momba ny pôrnôgrafia!
« Ny fandalinana ny fianarana neuroscientific avy amin'ny taranja pedofile Jeffrey Epstein dia tafiditra lalina ao amin'ny tambajotra manan-danja lehibe indrindra eran'izao tontolo izao
Maninona ny olombelona no alaim-panahy hahatratra ny tsy fahafatesana sy ny firaisana amin'ny AI »
Total visits: 13.015.604
Mireille van den Enk op Ny avana dia misolo tena ny fivavahana mpankafy fa ny mpanohana kosa mihevitra fa miady ho an'ny 'fahasamihafana sy fahatsapan-tena' izy ireo.